Deegaanku Waa Nolosheena (Maqaal) | jariibannews.com
Deegaanku Waa Nolosheena (Maqaal)
Feb 7, 2017 - Aragtiyood
Deegaanka Waa Nolosheena(Maqaal)
Waa maxay Deegaan?
Waa maxay farqiga u dhaxeeya xaaladaha Deegaanka Soomaaliya shalay iyo maanta ?
Waa maxay faa’idooyinka ay dhirtu u leedahay deegaanka?
Waa maxay caqabadaha haysta Deegaanadda Afrika sida Soomaliya?
Sidee ayaa loo xalin karaa dhibaatooyinka deegaanka haysta ama looga hortagikaraa?
Tallo soo-jeedin iyo gunaanad?
Deegaan waa cilmi iyo camal la-fahmay casrigan cusub,wallow uu waligiis jiray loona-baahnaa balse aan lagu baraarugsanayn,deegaankuna waa nolasheena oo dhan.
Deegaan: “Gibilka nagu xeeran oo isugu jira Dhirta,Dadka iyo walxaha”
Deegaan: waxaa laga wadaa wadarta guud ee dhammaan waxyaalaha dabiiciga ah, ha noqdeen kuwa xaaladii lagu abuuray ku sugan ama kuwa la dhalan rogay, islamarkaana jiritaankoodu ama baaxadoodu saamayso ladnaanta qofka ama noolaha kale,waxaana soo galaya hawada,dhulka, biyaha, noolaha iyo inta noloshu ka jiri karto.
Farqiga u dhaxeeya xaaladaha Degaanka Soomaaliya shalay iyo maanta.
Dhulka waxaa qiimo iyo qaayaba u yeela dabeecadiisa xagga Deegaanka,balse deegaankaas wanaagiisa wuxuu ku xiranyahay hadba dhulkaasi halkuu Juquraafi ahaan dhaco,qaab kubadeedka dunida.
Dhulka Soomaaliya wuxuu dhacaa KALA-BARKA DUNIDOO DHAN marka laga eego dhigaha lagu kala cabiro dhulka iyo hawada ee kala ah “LooL iyo Dhig Dhexo” (Longtitude,Latitude).
Waxaa dhulkeena mara xariiqda dhul-baraha ee looyaqaan ekuwaatar (Equator) kaas oo ku cabbiran lool lambar 3.80 iyo dhid dhexada 42.55 digrii (degree).
Sida caadiga ah,cimilada dalka Soomaliya waxay u dhexaysaa heer kulayle iyo kulayle ku dhawaad oo ka dhigaya qalayl iyo qalayl xigeen,celcelis ahaan heer kulku wxuu noqdaa 27.8o C (82o F), laakiinse waxaa laga yaabaa mar marka qaar inuu hoos u dhaco oo gaaro 0o C (32o F) ama kor u kaco oo gaaro 47o C (116o F).
Soomaliya waxay kamid ahayd wadamada Afrika ugu Dhirta,Daaqa,Duurjoogta,Dugaaga iyo duunyada badnaan jirtay uguna xoolo iyo kaymo badnaan jirtay.laakiin waxay sanadahan danbe kusii si qaysaa iney noqoto mid kamid ah wadamada Afrika ugu nabaad guursan ama ugu engagan.
Hadaba ma dowbaa in laga aamuso nabaad guurka iyo dhibaatooyinkiisa?
Xaalufka ku dhacay Deegaanka waxaa sababay arrimo ay kamid yihiin isticmaalka xad dhaafka ah ee kheyraadka dabiiciga ah,dab ka dhasha kaymaha,is-beddelka ku dhacay cimilada, dhul daaqsimeedkii oo la xirmeyey ama la beertay iyo maamul xumo.
Arrintaasi waxay keentay in la waayo noolayaashii yar yaraa oo ay bedeleen noocyo xayawaan kale ,burbur ku dhacay deegaankii ay ku noolaayeen noocyada xayawaanka qaarkood sida dhirtii dabiiciga ahayd oo meesha ka baxaday iyo nabaad-guur xawli u socda.
Sidaa darteed Deegaanku wuxuu u baahanyahay maareyn si dhirta iyo xooluhuba anfac u yeeshaaan,taasoo lagu gaari karo iyadoo la dhaqan-gasho daryeel deegaan.
Faa’idooyinka ay dhirtu u leedahay Deegaanka!
Faa’idooyinka dhirtu u leedahay deegaanka, waa ay badan yihiin,Tusaale ahaan waxaa inoogu filan neefta aan neefsano.
Dhirtu waxay hoy iyo huba u tahay naflayda ku nool Deegaanka gudkiisa.
Dhirtu waa wadnaha,maskaxda iyo laf-dhabarta dadka iyo duunyada.
Dhirtu waa mida aan ka helno waxaynu cuno,waxaynu xirano,daawo iyo agabka guryaha aynu deganahay.
Dhirtu deegaanka ay ku badan tahay waxaa ku badan roobka,roobkuna waxaa uu dhaqaa hawada wasaqowda ,dhulkana waxaa uu ka soo saaraa nimcooyin badan.
Deegaanka oo lahaagaajiyaa waxaa ka dhasha dad caqli badan, caafimaad iyo cimri dheer.
Bini’aadamku waxay Dhirta u Isticmaalaan daawo ahaan.
Bini’aadamku wuxuu dhirta uga faa’ideystaan Dalxiis ahaan.
Caqabadaha haysta Deegaanadda Afrika sida Soomaliya?
Dhibaatooyinka ka dhasha burburta Degaanka waxay ka weyn yihiin tan ka dhalata masiibooyinka kale ee dadka saameysa ama dabiiciga ah.
Xaalufinta Dhirta,Daaqa,Duurjoogta,Dugaaga iyo Duunyada.
Bacdu waxaa ay dhibaato ku haysaa deegaamada laga isticmaalo, waxaa ay si sahlan u dishaa dhirta iyo xoolaha, waxayna keentaa cuduro badan oo ku dhaca dadka iyo duunyada.
Dhirta la jarayo ayaa loo adeegsadaa in laga dhigto dhuxul, dhul badan oo ahaan jiray kaymo ayaa isu badalay lama degaan,waxaa dhulkaas ku soo noqnoqday abaaro is daba jooga.
Isbedelka cimilada iyo fatahaadaha Webiyada,Baddaha,Togaga,Harooyinka iyo Laasaska.
Xasilooni la’aan siyaasadeed sida dagaal shisheeye,colaad sokeeye iyo dagaal beeleed.
Dhul dullaysiga iyo carro nafaqo ka masaxidda (land degradation and soil erosion).
Isbedelka cimilada oo keeney inay Roobabkii raagaan,yaraadaan,mar marka qaarna laba waayaba.
Geedka garan-waaga oo musiibo deegaan ku noqday dhamaan dhulka Soomaalida.
Bacaad guur-guur (sand dune).
Heerka dhaqaalaha iyo aqoonta oo hooseysa.
Tirada dadka oo si xad dhaafa u kordhaysa.
Sida loo xalinkaro dhibaatooyinka degaanka haysta ama looga hortagi karo!
Barashada deegaanka iyo wacyigelinta.
Daryeelka Duur joogta iyo kala duwanaanshaha nolosha.
Maaraynta musiibooyinka iyo isbedelka cimilada.
Maaraynta qashinka iyo nadaafada deegaanka.
Ka shaqaynta iyo horumarinta tamar beddeli karta tan hadda jirta.
In la aasaaso seerooyin qaran iyo qorshe qaran oo lagu ilaaliyo dhirta iyo kaymaha.
Shaqo abuuris iyo wada shaqayn dowladda iyo dadwaynaha.
Samaynta iyo hirgalinta shuruucda deegaanka.
Cilmi baaris baahsan oo lagu sameeyo khayraadka dabiiciga ah.
In la’asaaso,lana qalabeeyo ilaaliyaasha deegaanka iyo duurjoogta.
Dhowrista,xanaanaynta,xifdinta,quudinta,dejinta,daawaynta, dugsiyeynta iyo daryeelka ugaarta. sida garanuugta,sagaarada iyo deerada.
Waxaa laseeraynaayaa dhul baaxad ku filan leh oo ah kayn ay ka baxdo dhirta loo isticmaalo dhuxusha,dhismaha,qoryaha qalabka samaynta quruxsamaynta udug samaynta iyo wixii lamid.
Ujeedada maqaalkaani waa sidii loo badbaadin lahaaa deegaankeena,duunyadeena,duurjoogteena,iyo dowladnimadeenaba.
Dhubucda maqaalku waxay tahay in dadka Soomaaliyeed ay si gaar ah u xanaanaystaan dhirtooda noocay doontaba ha ahaateee, hadii la xanaanayn waayo waxaa dhaxli doona musiibooyin deegaan sida kuwa hoos kuxusan.
Nabaad-guur,niyad guur,naxariis-guur, iyo naruuro la’aan ku kalifta in ay dhintaan intooda badani xaalna noqon doonta “kani waa dhulaan cidina lahayn”. “This is no man’s land”.
Maqaalku wuxuu xambaarsan yahay khibrad iyo aragti fog.
Mohamed Abdirizak Ali
© 2017 jariibannews.com - All rights reserved.